1 Me, Paulo, a menam Onyankopɔn pɛ so yɛ Kristo Yesu somafo,+ ne yɛn nua Timoteo,+ de kɔma Onyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto, ne akronkronfo+ nyinaa a wɔwɔ Akaia+ baabiara: 2 Yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adom ne asomdwoe nka mo.+ 3 Nhyira nka yɛn Awurade Yesu Kristo Agya+ ne ne Nyankopɔn a ɔyɛ ahummɔbɔ+ Agya ne awerɛkyekye+ nyinaa Nyankopɔn, 4 nea ɔkyekye yɛn werɛ yɛn ahohia nyinaa mu,+ nea ɛbɛyɛ a yɛn nso, awerɛkyekye yi a yenya fi Onyankopɔn hɔ+ nti, yebetumi akyekye wɔn a wɔwɔ ahohia biara mu no werɛ.+ 5 Na sɛnea amane a Kristo nti yehu dɔɔso wɔ yɛn so+ no, saa ara na awerɛkyekye a Kristo nti yenya no nso dɔɔso.+ 6 Na sɛ yɛwɔ ahohiahia mu a, ɛyɛ mo awerɛkyekye ne nkwagye+ ntia; anaa sɛ wɔkyekye yɛn werɛ a, ɛyɛ awerɛkyekye a ɛma mutumi gyina amanehunu a yɛn nso yehyia bi+ no mu. 7 Ne saa nti ahotoso a yɛwɔ no nhinhim, efisɛ yenim sɛ sɛnea muhu amane no bi no, saa ara na mubenya awerɛkyekye no nso bi.+ 8 Anuanom, yɛmpɛ sɛ mo ani pa ahohiahia a ɛbaa yɛn so wɔ Asia mantam+ mu no so, nhyɛso ankasa a ɛboroo yɛn ahoɔden so a ɛbaa yɛn so ma yesuroe sɛ yɛn nkwa mpo ho bɛba asɛm no.+ 9 Nokwasɛm ne sɛ yɛtee nka wɔ yɛn mu sɛ yɛawu awie. Eyi baa saa na yɛamfa yɛn ho anto yɛn ankasa ho so,+ na mmom yɛde yɛn ho ato Onyankopɔn a onyan awufo+ no so. 10 Efisɛ ogyee yɛn fii ade kɛse te sɛ owu mu, na obegye yɛn;+ na yɛn ani da no so sɛ ɔbɛkɔ so agye yɛn.+ 11 Nea mo nso mubetumi ayɛ aboa ne sɛ mobɛsrɛ ama yɛn,+ na ama nnipa pii ada ase+ ama yɛn wɔ nea nnipa pii mpaebɔ+ nti wɔde adom yɛn no ho. 12 Eyi ne nea yɛde hoahoa yɛn ho a yɛn ahonim di ho adanse,+ sɛ kronnyɛ ne nokwaredi a efi Onyankopɔn mu, a ɛnyɛ nnipa nyansa,+ na mmom Onyankopɔn adom, na yɛde abɔ yɛn bra wɔ wiase, ne titiriw no ɔkwan a yɛfaa so ne mo dii no mu. 13 Nea yɛrekyerɛw mo no nyɛ biribiara sɛ nea munim dedaw anaa mugye tom no ara; na mewɔ anidaso sɛ mobɛkɔ so agye atom akosi awiei,+ 14 sɛnea moagye atom ɔkwan bi so sɛ yɛn nti mubetumi ahoahoa mo ho,+ sɛnea mo nti yɛn nso yɛbɛyɛ wɔ yɛn Awurade Yesu da no mu no.+ 15 Enti ahotoso yi na na mewɔ bere a mebɔɔ me tirim sɛ anka mɛba mo nkyɛn+ no, na moanya anigye ne mprenu so,+ 16 na misi mo nkyɛn a mafa so akɔ Makedonia,+ na mafi Makedonia asan aba mo nkyɛn+ bio, na moagya me kwan+ kakra ama makɔ Yudea. 17 Na bere a mebɔɔ me tirim saa no, so mede nsɛm dii agoru?+ Anaasɛ me tirim a mebɔ no, mebɔ no honam mu,+ na ama m’asɛm ayɛ “Yiw, Yiw” ne “Dabi, Dabi”?+ 18 Nanso Onyankopɔn yɛ ɔnokwafo ma enti yɛn asɛm a yɛka kyerɛɛ mo no, ɛnyɛ Yiw ne Dabi. 19 Efisɛ Onyankopɔn Ba+ Kristo Yesu a me ne Silwano ne Timoteo,+ kaa ne ho asɛm mo mu no ammɛyɛ Yiw ne Dabi, na mmom Yiw abɛyɛ Yiw wɔ ne fam.+ 20 Na Onyankopɔn bɔhyɛ+ dodow nyinaa nam no so ayɛ Yiw.+ Enti nso, ɛnam no so na yɛka “Amen”+ kyerɛ Onyankopɔn de hyɛ no anuonyam. 21 Na Onyankopɔn ne nea osi so dua sɛ mo ne yɛn yɛ Kristo dea, na ɔno na wasra+ yɛn. 22 Afei nso wasɔ yɛn ano,+ na wama yɛn nea ɛbɛba no ho sɛnkyerɛnne,+ a ɛne honhom+ no, wɔ yɛn koma mu. 23 Afei, Onyankopɔn ne me kra dansefo+ sɛ nea ɛbɛyɛ a mo werɛ renhow pii+ nti na minnya mmaa Korinto no. 24 Yɛnyɛ mo gyidi so atumfoɔ,+ na mmom yɛyɛ mfɛfo adwumayɛfo+ a yɛboa ma mo ani gye, efisɛ mo gyidi+ na ama mugyina hɔ.+